Izipuni Zezokwelapha Nezinja
Ikhasimende elivela e-UK eli-odiwe lokuhlolwa kwengilazi, ingilazi yokuhlola ingilazi engezansi, ithubhu yokuhlola ingilazi yaselebhu evela kithi
Ikhasimende elivela e-UK eli-odiwe lokuhlolwa kwengilazi, ingilazi yokuhlola ingilazi engezansi, ithubhu yokuhlola ingilazi yaselebhu evela kithi. Le nqwaba yemikhiqizo ifakwe ngokushesha ekukhiqizeni. Ngibonga kakhulu ukwesekwa nokwethenjwa kwakho. Ngikholwa ukuthi singakwazi futhi ukusungula ubudlelwano bebhizinisi besikhathi eside. Siphinde ukwamukela b ...
Ikhasimende laseBulgaria Odawe burette, i-burette 100ml, i-burette 50ml evela kithi
Ikhasimende laseBulgaria Odawe burette, i-burette 100ml, i-burette 50ml evela kithi. Le nqwaba yemikhiqizo ifakwe ngokushesha ekukhiqizeni. Ngibonga kakhulu ukwesekwa nokwethenjwa kwakho. Ngikholwa ukuthi singakwazi futhi ukusungula ubudlelwano bebhizinisi besikhathi eside. Siphinde futhi samukele abathengi ukufinyelela cooperatio ...
Ikhasimende elivela e-Austria li-ode ithubhu yokuhlola ingilazi eyisicaba, i-borosilicate ingilazi yokuhlola ingilazi, ithubhu yokuhlola ingilazi engezansi evela kithi
Ikhasimende elivela e-Austria li-ode ithubhu yokuhlola ingilazi eyisicaba, i-borosilicate ingilazi yokuhlola ingilazi, ithubhu yokuhlola ingilazi engezansi evela kithi. Le nqwaba yemikhiqizo ifakwe ngokushesha ekukhiqizeni. Ngibonga kakhulu ukwesekwa nokwethenjwa kwakho. Ngikholwa ukuthi singakwazi futhi ukusungula ubudlelwano bebhizinisi besikhathi eside ...
Umsebenzi wokufa: yenza ikhofi nge-beaker elabhorethri, waya e-ICU ngemuva kokuyiphuza
Ukuhlinzwa ngokufa: yenza ikhofi nge-beaker elabhorethri, waya e-ICU ngemuva kokukuphuza Ukuzama ukuphepha kuyinto ebaluleke kakhulu. Kuphela kungumzimba ophilile nomzimba oqinile lapho kungaba khona izinkanyezi nolwandle. Zonke izivivinyo kufanele zigcine engqondweni imithetho yokuphathwa kwelabhorethri, ...
Ikhasimende laseBelgium Ordered glass beaker, glass beaker 1000ml, borosilicate beaker 150ml kithi
Ikhasimende laseBelgium Ordered glass beaker, glass beaker 1000ml, borosilicate beaker 150ml kithi. Le nqwaba yemikhiqizo ifakwe ngokushesha ekukhiqizeni. Ngibonga kakhulu ukwesekwa nokwethenjwa kwakho. Ngikholwa ukuthi singakwazi futhi ukusungula ubudlelwano bebhizinisi besikhathi eside. Samukela futhi ukuthenga ...
I-borosilicate beaker 100ml yethu, i-beaker 250ml, ama-beaker 100ml avela kithi a-odwa yiKhasimende laseNingizimu Korea, Ngiyabonga kakhulu ngokuseseka nokwethembela kwakho
Ikhasimende laseNingizimu Korea li-oda i-borosilicate beaker 100ml, i-beaker 250ml, ama-beaker 100ml avela kithi. Le nqwaba yemikhiqizo ifakwe ngokushesha ekukhiqizeni. Ngibonga kakhulu ukwesekwa nokwethenjwa kwakho. Ngikholwa ukuthi singakwazi futhi ukusungula ubudlelwano bebhizinisi besikhathi eside. Samukela nomthengi ...
Sisebenzisa kanjani ama-volumetric flasks
Isingeniso Izinhlobo eziningi ezahlukahlukene ze-laboratory glassware zingasetshenziswa ukulungiselela izixazululo zamakhemikhali. Lapho ukunemba nokunemba kubaluleke kakhulu, amabhodlela wevolumetric angcono kakhulu. Ibhodlela lenziwe ngengilazi ye-borosilicate, esetshenziswa kakhulu ngenxa ye-chemi yayo ...
Ikhasimende elivela eSouth Korea Liyala ama-beaker wokulinganisa, lenza ama-beaker engilazi, i-lab borosilicate beaker evela kithi, Ngiyabonga kakhulu ngokuseseka nokwethembela kwakho
Ikhasimende elivela eSouth Korea Liyala ama-beaker wokulinganisa, lenza ama-beaker engilazi, i-lab borosilicate beaker evela kithi. Le nqwaba yemikhiqizo ifakwe ngokushesha ekukhiqizeni. Ngibonga kakhulu ukwesekwa nokwethenjwa kwakho. Ngikholwa ukuthi singakwazi futhi ukusungula ubudlelwano bebhizinisi besikhathi eside. Thina ...
Ikhasimende laseMalaysia eli-odolwe i-buchner fannel, isihlungi se-buchner fannel, ifreyimu yesihlungi se-buchner evela kithi
Ikhasimende laseMalaysia eli-odolwe i-buchner fannel, isihlungi se-buchner fannel, ifreyimu yesihlungi se-buchner evela kithi. Le nqwaba yemikhiqizo ifakwe ngokushesha ekukhiqizeni. Ngibonga kakhulu ukwesekwa nokwethenjwa kwakho. Ngikholwa ukuthi singakwazi futhi ukusungula ubudlelwano bebhizinisi besikhathi eside. Siphinde ukwamukela bu ...